कोरोनाको भयावह अवस्था र मूकदर्शक सरकार - नेपालबहस
कोरोनाको भयावह अवस्था र मूकदर्शक सरकार
| १२:०२:०२ मा प्रकाशित
१३ बैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले यतिबेला भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । त्यसको असर नेपालमा समेत देखापरेको छ । नयाँ भेरिएन्टमा आएको भाइरसले पहिलो लहरको तुलनामा बढी प्रभाव पारेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
यतिबेला नेपालमा पनि संक्रमित र मर्नेको संख्यामा ह्वात्तै बढोत्तरी भएको छ । दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा मानिस संक्रमित हुन थालेका छन् । यो क्रम यस्तै रहे आउने महिना अर्थात जेठ लाग्दासम्म दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या १० हजार नाघ्ने अवस्था छ ।
कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्यासमेत बढिरहेको छ । अहिले त युवावयमा यसको असर ज्यादा देखिएको छ । त्यसैले तत्कालै प्रभावकारी नियन्त्रण संयन्त्रको तयारी जरुरी देखिएको छ । तर सरकार भने जतिबेला बढी त्रास फैलिएको छ, त्यतिखेर मस्त देखिन्छ । अहिलेसम्म पनि सरकारले जनजीवन सामान्य ठानेको छ । तर दैनिक संक्रमण र मृत्युदर भने डरलाग्दो बन्दैछ ।
कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा केवल दुई जना मात्रै संक्रमित हुँदासमेत सरकारले लकडाउन गरेको थियो । तर अहिले भने दैनिक चार दर्जन मानिसको मृत्यु हुने अवस्था बनिसक्दासमेत सरकार मूकदर्शक देखिएको छ । यो किमार्थ ठीक होइन । समयमै नियन्त्रणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन भने भारतमा भन्दा कहालीलाग्दो अवस्था आउन सक्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने चैत लाग्दा नलाग्दै विद्यालयहरु बन्द गरिसक्नुपथ्र्याे । साथै, बैशाखको पहिलो दिनबाटै लकडाउन गरिदिएको भए अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । भारतबाट नेपाल फर्किएका अधिकांशमा कोरोनाको संक्रमण फेला परेको छ । पश्चिम नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा न त व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टर नै बनाइए न आएकाहरुको चेकजाँच गर्ने बन्दोवस्त नै गरियो । जसले गर्दा लगभग भारतबाट आएका सबै नै संक्रमणको शिकार भए ।
उनीहरु बिना रोकटोक समुदायमा फैलिए । परिणामत : संक्रमण समुदायस्तरमै फैलियो । अहिले जताततै त्राहिमाम छ । विस्तारै राजधानीमा समेत व्यापक रुपमा फैलन थालेको छ । त्यसैले समयमै रोकथामका लागि सरकार सचेत हुनैपर्छ । नत्र यसको दुस्प्रभावले नेपाल र नेपालीको दुर्दशा सुरु हुने अवस्था छ । समयमै सरकार सचेत बनोस् ।
दैलेखमा कोरोनाले एउटै समुदायका ९ जनाको मृत्यु ६ मिनेट पहिले
कोरोनाबाट जनस्वास्थ्यकर्मी रत्नलाल श्रेष्ठको ज्यान गयाे १३ मिनेट पहिले
अर्जुनधारा नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङको निधन ४२ मिनेट पहिले
लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई धमाधम कारवाही गर्दै प्रहरी ५१ मिनेट पहिले
कोरोनाले सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर आशा चौधरीको मृत्यु ६ मिनेट पहिले
संक्रमित मतदातालाई छुटै मतदान केन्द्र,कर्मचारीलाई पीपीई ! २० मिनेट पहिले
विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ दिन ! २० मिनेट पहिले
नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? २३ मिनेट पहिले
निर्धन उत्थानले बिहीबारदेखि संस्थापक शेयर लिलामी बिक्री गर्ने, शेयरमूल्य कति ? ४० मिनेट पहिले
मेची प्रादेशिक अस्पतालका लागी नौ करोड बजेट विनियोजन ४३ मिनेट पहिले
आजदेखि मृतकको परिवारलाई सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्था अन्त्य ४७ मिनेट पहिले
महाकाली अस्पतालमा १८ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान ५१ मिनेट पहिले
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि चिन्तित ५६ मिनेट पहिले
दाङको आइसोलेशन सेन्टरमा अक्सिजन प्लान्ट ६ दिन पहिले
फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त, शपथ भोलि ! ४ दिन पहिले
म्याद गुज्रिएको औषधि प्रयोग गर्ने नर्सिङहोम माथि कारवाही ४ हप्ता पहिले
रुपन्देहीका २ हजार बढी कार्यकर्ताद्धारा नेकपा परित्यागको घोषणा ७ महिना पहिले
यी हुन् आजका चर्चित समाचार १ वर्ष पहिले
एफएम बन्द गराउन सक्ने कार्यविधि लागू २ वर्ष पहिले
क्वारेन्टाइन सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई १२ महिना पहिले